कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको सामूहिक ब*लात्कार
Home समाचार क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको सामूहिक ब*लात्कार
काठमाण्डौ । क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको सामूहिक ब*लात्कार । कोरोना माहामारीका कारण विदेश तथा एक परदेशबाट अर्को परदेशमा आउने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने नेपाल सरकारले व्यवस्था मिलाइ रहेको छ भने यसैबिच विभिन्न किसिमका घटनाहरु घटिरहेको सुन्नमा आइरहेको छ । कैलालीमा निर्माण गरिएको एक क्वारेन्टिनमा बसेकी आफू सामूहिक ब*लात्कारमा परेको एक महिलाले बताएकी छन् ।
लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा बसेकी ३१ बर्षकी महिलाले शनिबार मध्यरातमा उनको समूहिक ब*लात्कार भएको भन्दै न्याय मागेकी छिन् । उक्त पीडित महिला १२ दिनअघि मात्र भारतको बैंङ्ग्लोरबाट आएकी थिइन् र त्यस पछि उनलाई कैलालीको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। उक्त ब*लात्कारको घटनालाई लुकाउन खोजिएको भन्दै त्यहाका स्थानीयबासीहरुले आइतबार वडा नम्बर १ को कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले तीन जना आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ स्थानीयवासीहरुले निकै नै विरोध गरिसकेपछि। कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जाहेरी परेको छैन, त्यहीँ पनि हामी अनुसन्धान गर्दैछौं । उक्त पीडित महिलासंगै एउतै कोठामा बसेका अरु व्यक्तिहरु भने परीक्षण गरेर आफ्नो घर फर्कीसकेका छन् र त्यस पछि उनी कोठामा एक्लै बस्दै आएकी थिइन ।
ती युवती सँगै कोठामा बसेका अन्य व्यक्ति भने परीक्षण गरेर आफ्नो घर फर्कीसकेका कारण उनि कोठामा एक्लै भएकी थिइन् । आफूले एक्लै ड*र लाग्ने बताएपछि अर्को कोठामा जान अनुमति दिइएको उनले बताइन् । उक्त पीडित महिला १२ दिनअघि मात्र भारतको बैंङ्ग्लोरबाट आएकी थिइन् र त्यस पछि उनलाई कैलालीको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो ।
उनलाई त्यसपछि अर्कै कोठामा सारियो त्यस कोठाको ढोकामा चुकुल नभएको कारण उनलाई ढोकामा बेन्च राखेर भित्र सुत्न सल्लाह दिइएको उनले बताएकी छिन् । पीडित महिला सन्चो नभएर आराम गरिरहेकी थिइन । पछाडि झ्यालमा स्वयंसेवक आएर मलाई ढोका खोल्नुस् भन्यो तर मध्यरातमा आएका स्वयंसेवकले ढोका खोल्न भन्दा सुरुमा आफूले नमानेको उनले बताएकी छिन् ।
कहिले झ्याल त कहिले ढोकामा आए हैरान पारे पछि आफूले गाली गर्नुका साथै पुलिस बोलाउने चेतावनी समेत दिँदा पनि उक्त स्वयंसेवकले नमानेको पीडितले बताएकी छिन् । धेरै बेर पछि ढोका खोलेर के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न गरेको र त्यसपछि उ पछाडिपछाडि सर्दै गयो र अर्को कोठाको ढोका नजिक गइसकेपछि मलाई भित्र पछ्यार्‍यो र ढोका खोलेर मलाई ज*बरजस्ती गर्‍यो पीडित युवतीले भनिन् ।
त्यसैबिच अर्को स्वयंसेवक त्यहा आइपुगे र उक्त घ*टनाको भिडियो खिचेको उनले बताइन । त्यही बेला अर्को एक स्वास्थ्यकर्मी आएपछि आफूले गुहार मागेको र अब भने मैले सहयोग पाउने भए भनेर दाइ मलाई बचाउनुस् भनेँ तर उसले पनि ममाथि त्यस्तै नराम्रो व्यवहार गर्‍यो उनले बताइन । भिडियो खिच्ने स्वयंसेवकले उनीलाई पैसा मागेको र पैसा नदिएमा भिडियो भाइरल गरिदिने समेत धम्की दिएको उक्त पीडित युवतीले बताएकी छिन् ।
उनले आफू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समेत तयार रहेको र म बालबच्चा भएको आमा हुँ । ममाथि त्यस घटना नभएको भए अरुलाई झुटो आरोप लगाएर बेइज्जत गर्नुपर्ने के कारण छ र ? उनले बताइन ।
Previous articleSushant Singh Rajput – बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले गरे आत्मह*त्या
Next articleआज मिति २०७७ साल असार ३ गते बुधबार, आजको राशिफल कस्तो छ त?
लोकदोहोरीमा अर्को इतिहास तोड्दै राजेश हमालले खेलेको मन्जरी भाइरल (भिडियो सहित )